Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanokatra birao ara-toekarena any Seychelles i Reunion
Ny Nosy La Réunion frantsay no hany Nosy ranomasimbe Indianina manokatra birao toekarena ao amin'ny State Member of the Vanilla Islands Grouping. Ny filoha Didier Robert, ny filohan'ny Réunion Réunion dia tsy maintsy arahabaina noho ny asa mafy nanokatra varavarana ho an'ny orinasam-panjakan'i Reunion ary tamin'ny fanaovana asa ho an'ny Reunionais.
Ny Nosy La Réunion frantsay no hany Nosy ranomasimbe Indianina manokatra birao toekarena ao amin'ny State Member of the Vanilla Islands Grouping. Ny filoha Didier Robert, ny filohan'ny Réunion Réunion dia tsy maintsy arahabaina noho ny asa mafy nanokatra varavarana ho an'ny orinasam-panjakan'i Reunion ary tamin'ny fanaovana asa ho an'ireo Reunionais. Ohatra iray ity fiara nataon'i Didier Robert ity satria ny vokatra La Réunion, fantatr'izy ireo ny fomba ary koa ny fampiroboroboana ny Nosy Réunion ho toerana fizahan-tany ho azy irery dia tsy tongatonga ho azy irery. Ezaka toy izany no ahitàna ny fisian'ny nosy ary hita hatrany fa mety misy ifandraisany amin'ny fihaonambe i Reunion.
Nosokafan'ny Nosy Réunion ny biraon'ny antena misy an'i Seychelles, any Victoria. Ity no biraon'ny antena fahefatra ao amin'ny Ranomasimbe Indianina izay miantoka ny fisian'ny La Réunion any amin'ireo firenena ao amin'ny Vaomieran'ny ranomasimbe Indianina (IOC). Ny biraon'ny Réunion dia miorina amin'ny birao iray amin'ny rihana fahatelo amin'ny Espace Building ao Ile du Port. Ny andraikiny dia mijanona amin'ny fanamorana ny fifandraisana misy eo amin'ireo orinasa Reunionais sy ireo mpisehatra Seychellois, na amin'ny sehatra miankina na tsy miankina. Ny fitokanana ny biraon'ny Seychelles dia notanterahina niaraka tamin'i Andriamatoa Vincent Meriton, filoha lefitry ny Repoblikan'i Seychelles, ny filoha Didier Robert, ny filoham-paritry ny Réunion, ary Andriamatoa Lionel Majesté-Larrouy, masoivohon'i Frantsa tany Seychelles. Teo ihany koa ny sekreteram-panjakana misahana ny raharaham-bahiny Barry Faure, minisitra ary mpikambana ao amin'ny corps diplomatika. Ny fametrahana an'io faritra Réunion antena ao Seychelles io dia ao anatin'ny fandaharan'asan'ny fiaraha-miasa amin'ny faritra eropeana - INTERREG V Ranomasimbe Indianina. Anisan'ireo tanjona kendrena, hampiantrano ireo orinasa Reunionais amin'ny anton'asa ho avy sy hiasa na hiara-miasa amin'i Seychelles ny antena. Tamin'ny fisokafan'ny antenaany any Seychelles, ny vondrom-piarahamonina dia manarona ny Kaomisionan'ny Ranomasimbe Indianina iray manontolo, satria antennas mitovy amin'izany no natsangana tao Madagascar, Maurice ary Comores.
Didier Robert Filohan'ny Réunion
tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Antenne Reunion any Seychelles
Didier Robert, filoham-paritry ny nosy Réunion & filoha lefitra, Vincent Meriton avy any Seychelles
Filohan'ny faritra Reunion Didier Robert sy Seychelles VP Vincent Meriton manamarika ny fisokafan'ny Biraon'ny Réunion any Seychelles
Seychelles dia hanao laharam-pahamehana ireo mpilalao fizahan-tany eo an-toerana mba handrisika ny fitomboana?